Sii alaabooyin kala duwan oo buuxa
kaladuwan oo dhammaystiran AVR, UPS, Inverter iyo Transformers
In kabadan 20 shatiyada asalka ah ee adduunka oo idil ee alaabada korantada
Iibinta in kabadan 60 wadan & aagag, oo ay kugula taliyeen shirkado caan ah
Kala sareynta 5aad
Top 5 soo saaraha AVR Products ee Shiinaha 350 shaqaale, 40,000 aag wax soo saar leh oo leh qalab casri ah
Tayo & Gaarsiin La Xaqiijiyay
Shirkadda ISO9001: 2015 & IMPS GB / T29490-2013 waxay xaqiijiyeen hannaanka adag iyo maaraynta QC
Shirkadda Staba Electric Co., Ltd.. waxaa la aasaasay 2010, oo ku yaal Zhongshan, Shiinaha-xarunta gaadiidka ee Guangdong-Hong Kong-Marco Greater Bay Area. Staba waa soo saaraha hormuudka ka ah warshadaha iyo waliba sumcad caalami ah oo OEM ah oo xalalka korantada iyo korantada lagu xakameeyo. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan soo saarnay waa kuwa xasiliya danab otomaatig ah (AVR), Sahayda Awoodda aan la joojin karin (UPS), Inverters / Solar Inverters, Yar & Dhexdhexaad Cabbir la'aan DC Motors, modules koontarool ee matoorrada BLDC, iwm.
Staba waxay leedahay 43,000 sqm oo ah warshad casri ah oo iskeed u dhistay, oo leh marin muhiim ah oo ka mid ah xarumaha wax soo saarka waxaa ka mid ah:
- Qalabka shaqada ee birta & aqoon isweydaarsiga shaabadda,
- Iskuxirka birta xargaha birta iyo aqoon isweydaarsiga,
- Transformer fuulitaanka & aqoon isweydaarsiga aqoon isweydaarsiga,
- Hawlaha PCB iyo aqoon isweydaarsiga,
- Aqoon isweydaarsiga gawaarida BLDC,
- Alaabada korontada soo saarta shirkii ugu dambeeyay & aqoon isweydaarsiga tijaabada ah.
Wax soo saarka sanadlaha ah wuxuu gaaraa 50 milyan oo kumbuyuutar. Alaabtayada waxaa loo iibiyaa in ka badan 68 dal iyo gobollo adduunka oo dhan ah Macaamiisheena ugu waaweyn waa noocyo caan ka ah adduunka. Sannadkii 2019, Staba waxaa loo xushay inay tahay shirkad muunad ah oo ku jirta Tusmada Hoggaamiyaha Dhoofinta Dhoofinta.
Intii lagu gudajiray horumarka, Staba waxay ahmiyad weyn siineysaa uruurinta xuquuqda hantida aqooneed iyo sameynta nidaam maamul shirkadeed. Staba waa shirkaddii ugu horreysay ee gobolkeenna ka gudubta aqoonsiga IPMS ee GB / T29490-2013, iyadoo leh 4 shatiyada asalka ah ee Mareykanka iyo Midowga Yurub, iyo in ka badan 58 asal ahaan shatiyada Shiinaha ee la soo saaray iyo shatiyada nooca adeegga. Laga soo bilaabo 2014, Staba waxaa loo ansixiyay / dib loo ansixiyay inay tahay shirkad tiknoolajiyad sare oo heer qaran ah seddex jeer oo isku xigta ， waxaan leenahay laba xarumood oo teknoolojiyad shirkadeed: Xarunta Guangdong ee Xarunta Teknolojiyada Awoodda Cilmiga, iyo Zhongshan Power Product Engineering Technology Center. Laga soo bilaabo maalintii ugu horreysay ee aasaaskeeda, nidaamka softiweerka ERP iyo nidaamka maaraynta ee ISO9001 ayaa laga hirgeliyay dhinac kasta oo ka mid ah maareynta shirkadda, iyadoo la hubinayo habsami u socodka iyo hufnaanta nidaamka. Waqtigan xaadirka ah, waxaan haynaa 340 shaqaale, oo 33 ka mid ah loogu talagalay nidaamka R & D halka 38 ay u shaqeeyaan nidaamka maamulka shirkadaha. Isla mar ahaantaana, waxaan leenahay wadashaqeyn xoog leh iyo iskaashi wadatashi oo lala yeesho machadyo badan oo cilmi baaris ah iyo khubaro ku takhasusay warshadaha, iskuna dayaya inaan wax soo saarkeena, adeegyadeena, iyo tikniyoolajiyadaba ka dhigno safka hore ee warshadaha.
Staba waa shirkad qiimo-wade ah, oo qiimaheeda asaasiga ahi ay yihiin wax-qabad sare, hal-abuurnimo, iyo ujeedo macaamiisha. Si hufan ayay ugu wacan tahay waxtarka sare ee Staba ay ku heli karto abaalmarin ka sarreysa dhiggooda si kheyraad iyo faa iidooyin badan loo maalgashan karo R&D si markaa Staba macaashkeeda asaasiga ahi u noqdo mid waara; Hal-abuurnimadu waa daryeel bani'aadamnimo, dhammaan dhiirrigelinta hal-abuurnimada 'Staba' waxay ka timaaddaa caawinta daneeyayaasha sida loo keydinayo kheyraadka loona dareemo wanaag ku aaddan hannaanka naqshadeynta - soosaarka - kanaalka - la xiriirka macaamiisha; macaamiisha u janjeedha waxay ka tarjumaysaa aragtida Staba ee ku wajahan adeegga iyo heerkulka adeegga inta lagu gudajiro howlaha.
Kaliya fikrad naga siiya koontaroolka mootada iyo mootada, waxaan ku siin doonnaa xalal dhameystiran iyo matoor hagaagsan oo aad u baahan tahay. Waxaan rajeynayaa inaan kula shaqeeyo!
Ku bilow sidii warshad yar, waxaad diirada saartaa Danab xasilinta & UPS
Kelyaha Alaab-hubiye ee Pepsi Cola ee xasilinta danab
Aqoon isweydaarsi cusub oo 8000 m² Dhaafay ISO9001 shahaado ah oo La daahfuray dunida 1aad heer sare caato ah Mount Mount Stabilizer
Granded Shiinaha National Hi-tech Enterprise shahaado
Loogu magacdaray Shiinaha Soo-saaraha 5-aad ee Soo-dejiyaha Danab
Bilaabay nooca xasiliyaha danab ee Triac
Bilow inaad dhisato jardiinada warshadaha 40,000m²
La siiyay Guangdong Xarunta Cilmi Baarista Tiknoolajiyadda Cusub ee Sirdoonka
Beerta Warshadaha ee Staba ayaa la adeegsaday, awoodda wax soo saar oo labanlaabantay.
Nidaamka maaraynta xuquuqda lahaanshaha maskaxda ee GB / T29490- 2013 shahaado la siiyay
Waxaa la aasaasay Qeybta Gawaarida ee Staba BLDC
Shirkadda PCBA & Shirkadda Xallinta Qalabka Guryaha Yaryar ayaa la aasaasay
Mashiinka, Nadiifiye Vacuum, BLDC Fan Motor, BLDC Baabuur, Mashiinka DC-ga ee aan burushka lahayn, Mashiinka aan cadayan, weydiin for pricelist